ပြင်သစ် Expression '' Aller '' ပေါင်းစည်းထား Is
ယင်းကြိယာ '' Aller '' နှင့်အတူပြင်သစ်ဖော်ပြချက်
အဆိုပါမရှိမဖြစ်ပြင်သစ်ကြိယာ '' aller '' သငျသညျ, သှားငါးဖမ်းသွားပါနှင့်ပိုပြီးပေးနိုင်ပါတယ်။
"သွားပါရန်" ဆိုလိုတာကပြင်သစ်ကြိယာ aller, များစွာသောပြင်သစ် idiomatic အသုံးအနှုန်းတွေအတွက်အသုံးပြုသည်။ , ငါးဖမ်းသွားရသောအရာတို့ကို၏အောက်ဆုံးမှရနှင့်အတူအသုံးအနှုန်းတွေ၏ဤစာရင်းနှင့်အတူအဝေးနှင့်ပိုပြီးသွားကြဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူ aller ။
ဤမျှလောက်များစွာသောအသုံးအနှုန်းတွေ aller ကိုအသုံးပြုဖို့အဘယ်ကြောင့်ကောင်းတစ်ဦးအကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်; ဒါကြောင့်ပြင်သစ်ဘာသာစကားမှာအသုံးအများဆုံးနှင့်အရေးကြီးသောကြိယာတွေထဲကပါပဲ။ aller နှင့်အတူစိတ်တွင်စောင့်ရှောက်ဖို့အနည်းငယ်အခြေခံရှိပါတယ်။ ပထမဦးစွာကမမှန်ကြိယာရဲ့, ဒါကြောင့်ပုံမှန်အတိုင်းလိုက်နာပါဘူး conjugation ပုံစံများ။
ဒုတိယအချက်မှာ aller ၏တင်းမာနေအလွန်ဘုံ p asséတေးရေးဆရာအဆိုပါအရန်ကြိယာêtreအသုံးပြုသည်။ (Je suis alléငါသွားကြပြီ, ငါသွားလေ၏ကိုဆိုလိုသည်) ။ ဒီသာဓကအထဲတွင်အတိတ် participle ကိုဆိုလိုသည်, ထိုဂျေ, ဒါမှမဟုတ်စကားပြောင့်သောကျွန်မနှင့်အတူသဘောတူဖို့ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်မိန်းကလေးတစ်ဦးလွန်ခဲ့သော participle တစ်ဣတ္ဘာသာရပ်ညွှန်ပြရန်အ participle ရဲ့အဆုံးမှာတစ်ဦးအပိုဆောင်းအီးရှိသည်မယ်လို့, ကပြောသည်လျှင်: ဂျေ suis allée။
aller ၏နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့ထူးခြားမဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်တည်ဆောက်ရေးအတွက်ယင်း၏အသုံးပြုမှုဖြစ်ပါတယ်။ aller + မဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်စေရန်လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုကြိယာ၏ infinitive ၏ပစ္စုပ္ပန်တင်းမာနေပေါင်းစပ်, ဒါမှမဟုတ် le အနာဂတ် proche ။ အဆိုပါဆောက်လုပ်ရေးသို့မဟုတ် "တစ်ခုခုလုပ်မယ့်ခံရဖို့" "သွားရမည့်" ကိုဆိုလိုသည်။
ဘုံပြင်သစ် '' Aller '' အသုံးပြုခြင်း ဖော်ပြ.
allerala pêche ငါးဖမ်းသွားကြဖို့
allerala rencontre က de quelqu'un တစ်စုံတစ်ဦးကဖြည့်ဆည်းသွားကြဖို့
pied à aller ခြေလျင်သွားကြဖို့
quelqu'un à aller ကိုက်ညီဖို့, ဖြစ်လာခံရဖို့
aller au-devant က de quelqu'un တစ်စုံတစ်ဦးကဖြည့်ဆည်းသွားကြဖို့
aller au ဆုမွန်ကောင်း des choses အမှုအရာ၏အောက်ဆုံးရ
aller avec quelque ရှေးခယျြခဲ့ ကိုက်ညီခြင်းငှါ၎င်း, တစ်ခုခုနှင့်အတူသွားကြဖို့
aller chercher သွားရလာ; ရယူသည်; ဆွဲယူဖို့
aller က de pair တစုံ avec အတူလက်၌လက်သွားကြဖို့
aller en voiture ကားဖြင့်သွားကြဖို့
aller sans ဆိုးရွား; CA va sans ဆိုးရွား ဟုမပါဘဲသွားရန်, မှန်ကန်ကြောင်းသိသာခြင်း
Allez-y က! ဆက်လုပ်!
Allons donc! ထို့နောက်အပေါ် လာ. ကြည့်
Allons-y က! သွားကြရအောင်!
CA va? allez-vous မှတ်ချက်လေး? vas-tu မှတ်ချက်လေး? နေကောင်းလား?
y က va တွင်? ကြှနျုပျတို့သညျသှားရကြမည်လော
y က va တွင်! သွားကြရအောင်!
s'en aller ဝေးသွားကြဖို့
Vrais Amis - ပြင်သစ်အင်္ဂလိပ် Cognates - R ကို
စပိန်အတွက် '' တောင်မှ '' ဟု
အီတလီတွင်တတိယ conjugation (-ire) ကြိယာပုံစံကိုဘယ်လို
ပြင်သစ်တွင် "Rompre" (ကိုချိုးဖို့) အတွက်ရိုးရှင်းတဲ့ conjugation
ဂျာမန်ကြိယာ conjugation - Trinken - သောက်ရန်
အဆိုပါ Element တွေကို၏သည် .ionizer စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန
Ford ကား Mustang ဂီယာပြဿနာများစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်
အဆိုပါအကြီးမားဆုံးအရှုံးသမား2- ရုပ်ပုံများခင်မှာနှင့်ပြီးနောက်
ကို '80s ၏ထိပ်တန်း Styx သီချင်းများ
အယ်လ်Sidrón - စပိန် Neanderthal လူသားစားများအတွက်အထောက်အထား
တေးရေးဆရာနဲ့အဆိုတော်အဖြစ်ထိပ်ဆုံး 10 ကာရိုးဘုရင်ကသီချင်းများ
တစ်ဦး Hypothesis ဥပမာဘာတွေလဲ?
Iron Man - Avenger, စက်မှုလုပ်ငန်း, သူရဲကောင်း
အဆိုပါဘောရောဗုဒ္ဓေါဘုရားကျောင်း | ဂျာဗား, အင်ဒိုနီးရှား
"စူပါ Troopers" Movie, Quotes